Ogaden News Agency (ONA) – Agaasimihii hore Waaxda Caafimaadka “HASAD” oo lakulmay qaar kamida Hawlwadeenka JWXO ee Gobolka Erer.
Agaasimihii hore Waaxda Caafimaadka “HASAD” oo lakulmay qaar kamida Hawlwadeenka JWXO ee Gobolka Erer.
Posted by Wariye Qaran	/ November 30, 2019
Iyadoo Shirwaynihii 4aad ee JWXO kadib ay hawlaha Halganku si xawli ah uga socdaan gudaha iyo dibada ayaa waxaa maanta magaalada Jigjiga ku kulmay qaar kamida hawlwadeenka JWXO ee Gobolka Erer kuwaasoo kahadlay kaliya sidii loo sii dardar-galin lahaa guud ahaan hawlaha halganka gaar ahaan kuwa Gobolka Erer.
Kulankan oo uu Qabsoomidiisa lahaa Agaasimihii hore ee Waaxda Caafimaadka “HASAD” Halgame Shaafici Maxamed ayaa waxay Kaadirkii isugu yimid hoosta ka xariiqeen in kor loo qaado shaqooyinka halgan ee kasocda Gobolka Erer.
Dhinaca kale waxaa Kulanka diirada lagu saaray sidii loo sii dhiirigalin lahaa Bogaadinta jirta, loona sixi lahaa wixii dhaliil ah ee kajirta shaqada adag ee ay wajahayaan Maamulka Gobolka Erer Islamaarkaana loogu garabsiin hor’umarinta, dhisida garaadka, wacyiga bulshada, Abaabulka, dhaqaalaha iyo ilaalinta shuruucda utaala Xisbiga JWXO, Ugudanbayntiina waxaa lagu balamay hadal yar & hawl-badan.